Information Technology – Page2– Chandra Singh Shrestha
गुगल र माइक्रोसफ्ट आमनेसामने
Chandra S. Shrestha Information Technology, News & Information November 10, 20130Comment
काठमाडौ, श्रावण २६ – समय सधैं एकनास कहाँ रहन्छ र ? चक्रजस्तै घुमिरहने समय एकनास रहँदो हो त माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्स सधैं संसारका सबैभन्दा धनी बनिरहने थिए । कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) को बजारमा एकछत्र कब्जा जमाइरहेको माइक्रोसफ्टले पछिल्लो समय सर्च इन्जिनमा आफूलाई नम्बर वन बनाइरहेको गुगलसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ ।
त्यो प्रतिस्पर्धामा माइक्रोसफ्ट गुगलसँग टिक्न नसकेर केही ठाउँमा थला परेको छ । केही ठाउँमा सकिनसकी घस्रँदैछ ।
गुगलको मुख्य प्रोडक्ट सर्च इन्जिन । माइक्रोसफ्टको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम । भिन्न क्षेत्रका कम्पनी आमनेसामने नहुनुपर्ने । पछिल्लो समय दुवै कम्पनीले बजारको खोजी गर्ने क्रममा उस्तै-उस्तै प्रोडक्ट बजारमा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
माइक्रोसफ्ट मुख्य आम्दानीको स्रोत विन्डोज बाहेक अन्य प्रोडक्ट विकासमा लागेको छ । उता गुगल पनि भच्र्युअल दुनियाँमा नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याएर आफूलाई सबैको आँखामा पार्दैछ । उसले भर्खरै दुर्गममा इन्टरनेट पुर्‍याउन बेलुनको सहयोग लिने प्रविधि प्रोजेक्ट लुन सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुगल प्लसमा नयाँ सफ्टवेयर हालेको छ । शुल्क लिएर संगीत उपलब्ध गराउने सेवा सुरु गरेको छ । गुगल म्यापलाई परिस्कृत गरेर फेरि लन्च गरेको छ । हार्डवेयर उत्पादनमा हात हालेर स्मार्ट चस्मा गुगल ग्लास ल्याउँदैछ । गुगल सर्च, यु ट्युब, जिमेल, ब्लगर, प्ले, ड्राइभ, गुगल प्लस, लगायतका प्रोडक्ट पुरानै हुन् । माइक्रोसफ्टले पनि विन्डोज, स्काइप, एक्स बक्स, बिङ, अफिस, इन्टरनेट एक्स्पोररलगायतका प्रोडक्टका साथ आफूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि छाड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यस्ता प्रोडक्टमा कहाँनेर दुईबीच प्रतिस्पर्धा भयो त ? गुगल स्थापनाको पहिलो दशकभर एकअर्काप्रति सहयोगी देखिएका गुगल र माइक्रोसफ्ट अहिले आएर प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन् । दुवै कम्पनीको मुख्य प्रतिस्पर्धा सर्च इन्जिनमा छ ।
हरेक कुरा खोज्न अहिले गुगल गर्न थालिएको छ । त्यसको प्रतिस्पर्धा माइक्रोसफ्टको बिङले गर्दैछ । नामबाट क्रिया बनिसकेको गुगलको लोकपि्रयता माइक्रो;mफ्टका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । अमेरिकी कम्पनी गुगलको सर्चमा घरेलु बजार ७८ प्रतिशत रहेको बीबीसीको दाबी छ । यद्यपि बिङको दरो उपस्थितिले गुगलको एक समयको एकछत्र बजारमा राम्रो विकल्प उपस्थित भएको छ । बिङले केही नयाँ फिचर दिएर इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई आफूतिर आकषिर्त गरिरहेको छ । त्यसैले संसारमा सर्च इन्जिनको बजारको २० प्रतिशत हिस्सा लिएको बिङले विस्तारको सम्भावना देखाउँदै गएको छ । यसले होमपेज खोल्नासाथ पृष्ठभूमिमा रंगीन आकर्षक तस्बिरहरू उपलब्ध गराउन थालेको छ । यस्तै महत्त्वपूर्ण स्थानसँग सम्बन्धित लिंकसमेत देखाउँछ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? विग प्रयोगकर्ताको होमपेजको किनारामा उसका फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई देखाउँछ । उनीहरूले समेत खोजेको जानकारीलाई लाइक गर्न सक्छन् । माइक्रोसफ्टले सन् २००९ मा सुरु गरेको बिङका अरू फिचर गुगलसर्चका जस्तै छन् । यसले दुवै कम्पनीलाई प्रतिपर्धी बनाइदिएको छ ।
गुगल र माइक्रोसफ्टको प्रतिस्पर्धा इमेल सर्भिसमा समेत छ । माइक्रोसफ्टले भारतका सविर भाटियाले विकास गरेको हटमेल सन् १९९७ मा ४० करोड डलरमा किनेको थियो । त्यत्रो रकम तिरेको हटमेललाई प्रतिस्पर्धामा टिकाउन नसकेर माइक्रोसफ्टले अघिल्लो वर्ष बन्द गर्‍यो । उसले पछिल्लो समय आउटलुक डटकममा आफूलाई सिफ्ट गरेको छ । जिमेलले ग्राहकलाई निःशुल्क १५ जीबी स्पेस उपलब्ध गराइरहेको छ । आउटलुकले भने तपाईंलाई चाहिए जति स्पेस दिने दाबी गरेको छ । उसको दाबीमा तपाईंको इन्बक्स इमेलले भरिए स्वतः स्पेस थपिन्छ । दुवैले इमेल प्रयोगकर्तालाई तान्न नयाँ फिचरहरू थपिरहेका छन् ।
दुवै कम्पनीले क्लाउड कम्प्युटिङमा करोडौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । गुगलले गुगल ड्राइभ र माइक्रोसफ्टले स्काई ड्राइभ नाममा प्रयोगकर्तालाई क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्काई ड्राइभले ७ जीबी स्टोरेज स्पेस सित्तैमा उपलब्ध गराउँछ । स्काई ड्राइभको सफ्टवेयर आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपरेपछि यसको लोगोयुक्त फोल्डरभित्र राखेको सामग्री आफैं स्काई ड्राइभमा स्टोर हुँदै जान्छ ।
गुगलले उपलब्ध गराउन थालेको ड्राइभलाई जिमेल आईडीमार्फत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले १५ जीबी स्पेस उपलब्ध गराउँछ । त्यसलाई गुगल जिमेल, गुगल प्लसलगायतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गुगलले माइक्रोसफ्टको अफिस सफ्टवेयरसग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको छ । उसले वेबमा आधारित सफ्टवेयर गुगल डक्स इमेल प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको छ । जिमेल प्रयोगकर्ताले आफ्नो डकुमेन्ट वेबमै तयार गरेर गुगल ड्राइभमा सेभ गर्ने, साथीहरूबीच सेयर गर्ने गर्न सक्छन् । सेयर गरेको डकुमेन्टलाई दुवै प्रयोगकर्ताले एकै समय एडिटसमेत गर्न सक्छन् । गुगल डक्समा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडसिट एप्लिकेसन, स्लाइड शो पि्रजेन्टेसन मेक र्फम विल्डर एन्ड ड्रइङ टुल्सलगायत उपलब्ध गराउँछ । माइक्रोसफ्ट अफिसको जति फिचर नभए पनि गुगल डक्सले इन्टरनेटमा काम गरिरहनेहरूका लागि राम्रो विकल्प दिएको छ । माइक्रोसफ्टको अफिस लाइभ वर्कस्पेसले माइक्रोसफ्ट अफिसको अनलाइन भर्सन उपलब्ध गराउँछ ।
मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टममा समेत दुवै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । गुगलको ओपन सोर्स ओएस एन्ड्रोइडसँग माइक्रोसफ्टले विन्डोजमार्फत प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कम्प्युटर ओएसमा माइक्रोसफ्टले एकछत्र बजार लिएजस्तै एन्ड्रोइडको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । सित्तैमा आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अधिकांश मोबाइल कम्पनीले आफ्नो मोबाइल हार्डवेयरमा यसलाई प्रयोग गर्छन् । यही ओएस प्रयोग गरेर सामसुङ विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी बनेको छ । लामो समय नम्बर एक रहेको मोबाइल उत्पादक कम्पनी नोकियाले ओएसकै कारण प्रतिस्पर्धामा पछारिएपछि आफ्ना स्मार्टफोनमा माइक्रोसफ्टको विन्डोज मोबाइल भर्सन प्रयोग गर्न थालेको छ । विकिपिडियाका अनुसार सन् २०१३ को पहिलो क्वाटरमा एन्ड्रोइड प्रयोग भएका १५ करोड ६१ लाख ८६ हजार मोबाइल सेट बिक्री भएका छन् । यस्तै यस अवधिमा विन्डोज प्रयोग भएका ५९ लाख ८९ हजार सेट बिके ।
च्याट मेसेन्जर गुगल टक र माइक्रोसफ्टले भर्खरै किनेको स्काइपको प्रतिस्पर्धा त्यस्तै छ । दुवैले निःशुल्क भ्वाइस र भिडियोकलको सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । दुवैले सस्तोमा मोबाइल र ल्यान्डलाइनमा फोन गर्ने सुविधासमेत दिएर इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई आफूतिर तानिरहेका छन् ।
इन्टरनेट ब्राउजरमा पनि दुवै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ । कुनै समय ब्राउजरमा माइक्रोसफ्टको इन्टरनेट एक्स्प्लोररको आधिपत्य थियो । विस्तारै त्यो स्थान गुगलको क्रोम ब्राउजरले लिँदै गएको छ । गुगल क्रोम विलकुलै नयाँ ब्राउजरका रूपमा आएको छ । पछि आए पनि इन्टरनेट ब्राउजरको लोकपि्रयतामा गुगल क्रोमले इन्टरनेट एक्स्प्लोररलाई उछिनेको छ । गुगलक्रोमका प्रयोगकर्ता २९.०३ प्रतिशत छन् भने इन्टरनेट एक्स्प्लोररका २२.५४ प्रतिशत मात्र । तपाईंचाहिँ कसको प्रोडक्ट प्रयोग गर्नु हुन्छ ? गुगलको कि माइक्रोसफ्टको ?
(साभार µ इकान्तिपुरबाट)
यसरी छिटो बन्द हुन्छ कम्प्युटर
Chandra S. Shrestha Information Technology, News & Information August 31, 20130Comment
कम्प्युटर प्रयोग गर्नेहरुलाई कम्प्युटर सुस्तो खुलेर र ढिलो बन्द भएर हैरान बनाएको हुन्छ। तपाइँले दैनिक नै कम्प्युटर ढिलो बन्द भएका कारण घर वा कार्यालयबाट निस्कन ढिलाइ भोग्नुभएको होला। कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम बन्द हुनका लागि केही समय लागिहाल्छ। त्यो तपाइँ हामीलाई हतार भएको बेलामा निक्कै लामो लागिरहेको हुन्छ।
त्यसैले कतिपयले कम्प्युटरलाई छिटो बन्द गराउनका लागि फोर्स सटडाउन जस्ता सफ्टवेयर पनि हालेका हुन्छन्। तर, सफ्टवेयर राखेर छिटो कम्प्युटर बन्द गराउनु भन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय पनि छ। जसले तपाइँको कम्प्युटर तपाइँले चाहे जसरी नै छिटो बन्द हुने बनाउँछ। त्यसका लागि कुनै सफ्टवेयरको आवश्यकता पनि पर्दैन अनि कम्प्युटरको पावर बटन दबाउन वा तार फुस्काउन पनि पर्दैन। त्यसका लागि सानो उपाय मात्र लगाए हुन्छ।
तपाइँले आफ्नो कम्प्युटरलाई छिटो बन्द गराउन चाहनुहुन्छ भने कम्प्युटरको रजिष्ट्रीमा सानो परिवर्तन गरे मात्र हुन्छ। (यसखालको परिवर्तन गर्दा सामान्यतया कम्प्युटरमा खराबी नआउने भएपनि रजिष्ट्री फाइल ब्याकअप गर्न तथा सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिन्छ)
त्यसका लागि तपाइँ आफ्नो कम्प्युटरको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा रहेको RUN मा क्लिक गरेर regedit टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके वा इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि देखिने Registry Editor वीण्डोमा त्यसपछि HKEY_CURRENT_USER मा त्यसपछि Control Panel र Desktop मा क्लिक गर्नुहोस्। Desktop मा क्लिक गरेपछि तपाइँले दायाँ तर्फो बक्समा WaitToKillServiceTimeout लेखेको फाइल देख्नुहुन्छ। त्यसलाई दायाँ क्लिक गरेर Modify मा क्लिक गर्नुहोस्।
यसरी क्लिक गरेपछि WaitToKillServiceTimeout लेखेको एउटा बक्स वीण्डो देखिन्छ जसमा भ्यालुमा कुनै अंक लेखिएको पाउनुहुनेछ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर १००० भ्यालु राख्नुहोस् र OK मा क्लिक गरेर छोड्नुहोस्।
यती गरिसकेपछि तपाइँको कम्प्युटर पहिले भन्दा धेरै छिटो बन्द भएको अनुभव गर्नुहुनेछ।
वीण्डोज सेभेन चलाउनुहुन्छ भने रजिस्ट्री एडिटरमा गएपछि HKEY_LOCAL_MACHINE त्यसपछि SYSTEM त्यसपछि CurrentControlSet त्यसपछि Control मा गएर WaitToKillServiceTimeoutलेखिएको फाइल पाउनुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्दा आउने WaitToKillServiceTimeout लेखिएको वीण्डोमा रहेको भ्यालु डाटा भन्ने अप्समा देखिने १२००० लाई २००० मा परिवर्तन गरेर ओके गर्नुभयो भने तपाइँको कम्प्युटर छिटो बन्द हुन्छ।
Chandra S. Shrestha Information Technology, News & Information August 23, 20130Comment
एन्ड्रोयडका केही सुन्दर एप्लिकेसनहरु
काठमाडौं । पछिल्लो समय एन्ड्रोयडका एप्लिकेसनहरु युवा पुस्तामाझ निकै चर्चित बनेको छ । प्रयोग गर्न सजिलो र डाउनलोड पनि गर्न सजिलो भएकोले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । सन् २०१३ मा एन्ड्रोयडले नयाँ र सुन्दर एप्सहरु लिएर आएका छन् जुन तपाईंलाई पनि मन पर्न सक्छ । आउनुहोस्, हेरौं यस्तै केही एप्सहरुः
१) प्याटर्नः लुकस रोचाले तयार गरेको यो एप्स तपाईंको वालपेपरको लागि काम लाग्न सक्छ । यसमा विभिन्न रंगिन प्यार्टनहरु रहेका छन् जसलाई तपाईंले आफ्नो मोबाइल र त्यसको किअनुसार डाउनलोड र सेयर गर्नुसक्नु हुनेछ ।
२) आई इन द स्काईः यो एउटा वेदर एप्स हो जसमा चारवटा विगेटहरु र ड्यासबोर्ड क्लकजस्ता फिचरहरु रहेका छन् । यो एड सर्पोटेड भएकोले बीचमा विज्ञापन आउने झन्झटबाट मुक्त यसलाई तिरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
३) पकेटः यो एप्सको मद्दतले तपाईं आफूलाई पछि पढ्न मनलागेका लेख, भिडियो र वेभपेजहरु सेभ गर्न सक्नुहुनेछ ।
३) ग्राण्ड एसटीः यसमा हार्डवेयरका नयाँ डिजाइनहरु र उत्पादनहरु बारेमा दैनिक रुपमा अपडेट गरेको पाउन सकिन्छ । यसमा ति उत्पादनहरुको फिचर, चलाउने तरिका, प्रयोगकर्ताहरुको अनुभवहरु समेत समावेश गरिएको हुन्छ ।
४) प्रेस रिडरः यो एप्सले फिड्ली, फिड, र्यांगलर जस्ता स्रोतहरुको डाटा सजिलोसँग प्रदान गर्दछ । यसमा ठाडो र तस्रो स्वाप गर्ने, ब्याकग्राउण्ड सिंकिङ्गजस्ता फिचरहरु रहेका छन् ।
५)एक्सपेडियाः यो एप्स घुम्न रुचाउने मानिसहरुका लागि सहयोगी हुनसक्छ । यो एप्सको मद्दतले तपाईं होटल र प्लेनहरु बुकिङ्ग गर्न सक्नुहुनेछ ।
– See more at: http://www.ratopati.com/2013/07/07/75013.html#sthash.tVgGG4wx.dpuf